महेन्द्रपुलमा ‘रचइताज फेसन बुटिक’ , निकिताले गरिन् उद्घाटन – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ कार्तिक १८ गते आईतवार १४:४६ मा प्रकाशित
राम्रो देखिने रहर कस्लाई हुँदैन र । रहरले मात्रै पनि भएन । फेसन कन्सीयस त हुनै पर्यो । कुन ड्रेस आफ्नो ज्यान सुहाउँदो छ ? कुन समयमा कस्तो ड्रेस लगाउने ? यसबारे पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ ।
यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै पोखराको महेन्द्रपुलमा रचइता मकाजुले ‘रचइताज फेसन बुटिक’ सञ्चालनमा ल्याएकी छिन् । आइतबार मिस नेपाल २०१७ निकिता चन्दकले रिबन काटेर बुटिकको उद्घाटन गरिन् ।
शुभारम्भको अवसरमा बोल्दै सञ्चालीका माकाजुले गुणस्तरीय उत्पादन बजारमा ल्याउने बताइन् ।
‘पछिल्लो समय मानिसहरु ड्रेस कन्सीयस हुन थालेका छन् । कुन कार्यक्रममा जाँदा कस्तो लगाउने ? माहौल अनुसारको फेसनकालागि सोच्नेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ’ उनले भनिन् ‘हामीले हरेक अकेजन, प्रोग्राम वा अन्य कुनै विशेष समयका लागि शरिर र माहौल सुहाउँदो डिजाइन गर्छौं । सबै प्रडक्टमा क्वालिटि मेन्टेन गर्छौं ।’
सारी, लेहङ्गा, कुर्था, क्याजुअल ड्रेस, पार्टी ड्रेस, ब्राइडल वेयर, पावर ड्रेसिङ लगायत अर्डर अनुसारका कपडामा बुटिक डिजाइन गरिने उनले जनाइन् । बच्चा तथा युवाहरुका कपडामा पनि डिजाइन गरिने उनको भनाइ थियो ।
करिब ५० लाखको लगानिमा बुटिक सञ्चालनमा आएको हो । बुटिकले शुभारम्भको अवसरमा ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
‘लकडाउन’ वैशाख १५ सम्म
गोरखामा पहिलोपल्ट खुला तथा दूरशिक्षा